ILa Vecchia - yindlu entle yelali yaseTuscan
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguEmma
ILa Vecchia yindlu yelali yaseTuscan ehlaziyiweyo enemigangatho emithathu, eyakhiwe kwicala lentaba kumbindi welali yaseCardoso.
Indawo yokuphumla nokuvuselela, iLa Vecchia ibonelela ngegumbi lokuhlala elikhulu elinemibono yeentaba, indawo yomlilo evulekileyo yemveli, iithayile zeterracotta kunye nemiqadi ye-chestnut, ikhitshi elihle elinebhastile elinendawo yokutyela, amagumbi amabini okulala athandekayo, kunye namathafa amabini amancinci kunye negumbi lokuhlambela losapho. igadi ethe tyaba yokuphumla emini okanye ngokuhlwa.
ILa Vecchia ibonelela ngeendawo ezininzi ezahlukeneyo zokuphumla kwakho iholide. I-terrace yindawo yelanga yesidlo sasemini kunye nendawo ezolileyo yesiselo sangasese sangokuhlwa. Ibhentshi kwi-terrace yokungena, ezantsi kwamanyathelo, yindawo efanelekileyo yeti yakho yasekuseni okanye ikofu, ujonge ngaphandle kwePiazza Vecchia ezolileyo.
Ukujonga kwifestile yegumbi lokuhlala thatha ukujonga kwakho kuluhlu lwentaba olujongeneyo, kunye nokhozi olujikelezayo ngaphezulu.
Ikhitshi inika indawo entle yokulungiselela ukutya okumnandi kweTuscan oya kukufumana kulo mmandla. Ixhotyiswe kakuhle, inezixhobo ezitsha kunye nomhlaba omangalisayo weCarrara marble work, ikhitshi yenzelwe abo bathanda ukupheka. Ikhitshi libonelela ngetafile yokutyela kwiqela lakho ukuze lonwabele ukutya okunencoko, kunye nendawo yokufunda enemiqamelo kunye nelitye lentaba.
Igumbi lokuhlala, elinemiqadi ye-chestnut, iithayile zeterracotta, ipiyano, iigitala kunye neencwadi ezininzi kunye nemidlalo, yindawo entle yokuphumla, nokuba kusemva kokubona indawo exakekileyo eLucca, ukwenza imisebenzi ye-adventure eGarfagnana, okanye ukuzola ukubukela ilanga. jikeleza icala lentaba ukusuka kubuhle besofa.
Ukusebenza ekhaya kulungiselelwe idesika enesitayile kunye nendawo yeshelufu, isitulo sokuguqa se-ergonomic kunye nemonitha kunye nomshicileli okhoyo.
Iimitha ezingama-50 ezantsi kwendlela, uya kufumana igadi ethe tyaba ejonge ngaphezulu kwezindlu zelali ukuya ngasentabeni, ithatha ilanga lasemva kwemini njengoko lijikeleza. Sebenzisa iibhaskithi zepikiniki ukuthwala isidlo sakho sasemini apho, kwaye wonwabele iimbono.
ICardoso yilali eyamkelwa ngendlela emangalisayo kwaye enobuhlobo, ethe ngcu phezulu kwiinduli zaseGarfagnana, indawo yepaki yesizwe ekhuselweyo, etyebileyo ngembali kunye nenkcubeko.
Ilali inendawo yokutyela kunye nebha - iindawo ezifanelekileyo zokusela i-al fresco kunye nokutya ngeengokuhlwa ezifudumeleyo, ezinembono entle yeentlambo kunye nentaba engaphaya.
Icawe ihleli phezulu kwilali, intsimbi yayo ikhalela abahlali belali ngeyure nganye. Iindlela ezimxinwa kunye nezinyuko zamatye zilandelela iindlela ezijikeleze ilali, kunye neendlela zelizwe zikuthatha ungene kwindawo ejikelezileyo; ukuya emahlathini, umnqamlezo encotsheni yentaba, nakwilitye lokusila elidala nengxangxasi.
IBarga inokubonwa ngokuthe ngqo ngaphaya kwentlambo, kumphakamo ofanayo neCardoso, kwintaba echaseneyo. Le yidolophu edlamkileyo ehlotyeni, egcwele umculo kunye nezinye iziganeko zenkcubeko, i-20-minute drive ukusuka eCardoso.
I-Lucca ilungele uhambo losuku ngemoto okanye ngololiwe, kwaye iindonga zayo zakudala ziyindawo entle yokuhamba, naliphi na ixesha lonyaka, ngaphambi okanye uthumele isidlo sasemini esimnandi seLucchese. Olunye ukhetho lohambo lwemini yiPisa, iFlorence kunye neelwandle ezijikeleze iViareggio.
I-Garfagnana yeyona ndawo ibalaseleyo yokuhamba, ukuqubha emfuleni kunye nokukhwela ibhayisekile, kwaye kukho amathuba ohlukeneyo emisebenzi ye-adventure efana ne-canyoning. Kwiinyanga zasebusika, i-Abetone luhambo losuku lokutyibiliza ekhephini.
Ndingumamkeli osebenzayo, okhoyo kwi-intanethi ngeengcebiso kunye neengcebiso kunye nokuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo ngaphambi kokuhlala kwakho. Ngelixa sihlala eLa Vecchia, uqhakamshelwano lwethu lwasekhaya lukhona ukukunceda ngokungena nokuphuma, kunye nokubonelela ngenkxaso kunye neengcebiso zokunceda ukwenza ukuhlala kwakho kugqibelele.
Ndingumamkeli osebenzayo, okhoyo kwi-intanethi ngeengcebiso kunye neengcebiso kunye nokuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo ngaphambi kokuhlala kwakho. Ngelixa sihlala eLa Vec…
Inombolo yomthetho: 594
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cardoso